Atọm 1.0 dị maka nbudata | Site na Linux
M na-eji ruo oge ụfọdụ na-arụ ọrụ dị ka Ihu njedebe abụọ ezigbo ama ederede editọ, m na-ezo aka Ederede Dị Nsọ y brackets, nke ikpeazụ bụ nke m na-eji na ndabara.
N'oge ahụ, ọ nwalewo nsụgharị ndị gara aga nke Atọm ọ dịghịkwa mgbe o kwere m. Ọ dị nnọọ nwayọ, koodu mmecha ya adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ nweghị ọtụtụ nhọrọ, agbanyeghị, yana mbipute 1.0, dị ụbọchị ole na ole gara aga, ọdịdị ala agbanweela nke ukwuu.
1 Kedu ihe Atom na-ewetara anyị?
2 Atọmịọnụ Atom zuru
3 Wụnye Atọm
Kedu ihe Atom na-ewetara anyị?
Dịka m kwuchara, otu ihe na-enye m nsogbu bụ ihe gbasara nsụgharị Atom gara aga bụ nhụjuanya na koodu mmebi iwu ya, mana na ụdị a ọ meziwanye nke ukwuu autocomplete-gbakwunyere, nke na-abịa arụnyere dị ka ngwugwu.
Ihe ngwugwu ndi ozo gunyere nke mere Atom bu onye editọ siri ike tinye-gbakwunyere, iji bulie asụsụ Google mepụtara, atọm-typescript n'ihi na nkwado zuru ezu nke TypeScritp, Microsoft free mmemme asụsụ na omnisharp-atọm, maka C # na.
Atọmịọnụ Atom zuru
Na mmasị Atom anyị na-achọta ọtụtụ nhọrọ iji hazie ya dịka ụtọ na mkpa anyị si dị, ma anyị nwere karịa 600 gburugburu (aka skins) ịhọrọ site na, na karịa 2000 ngwugwu ịbawanye arụmọrụ ya.
Na Atọm 1.0 etinyerela ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma dịka ihe nchọgharị sistemụ file, ngwa ngwa search na Finder Ajị ajị-Finder, ọtụtụ nhọrọ nhọrọ na cursors, snippets, Markdown support, na ndị ọzọ, ọtụtụ ndị ọzọ ..
Ihe dị ịtụnanya banyere ihe a niile bụ na arụmọrụ nke ngwa a abawanyela nke ọma, yana nzaghachi ya mgbe ọ na-ede ederede.
brackets ọ ka bụụrụ m nhọrọ ka mma maka ọrụ dịka FrontEnd. Naanị ịnwe nhọrọ iji hụ agba mgbe ị na-etinye cursor na ihe onwunwe CSS, ma ọ bụ ihe oyiyi mgbe ị na-etinye cursor na ụzọ, na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mfe.
Agbanyeghị, m ga-agba Atọm ịnwale ma nwee ike ịchọpụta ọtụtụ ọrụ yana ojiji ya.
Ọ bụrụ na iji ArchLinux, anyị nwere ike iwunye Atom site na AUR:
Ọ bụrụ na anyị ejiri nkesa .deb ma ọ bụ .rpm, anyị nwere ike ibudata ọnụọgụ abụọ ozugbo na saịtị Atom. N'ezie, ha na-agbakọta maka 64 ibe n'ibe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Atọm 1.0 dị maka nbudata
Daalụ maka ihe ọmụma ahụ. Aga m elele atom iji hụ ihe ọ bụ, ebe ọ bụ na m ga-amalite usoro wee wụnye akara ngosi ihe nkiri a na-ahụ anya wee hụ nke m nwere obi iru ala.
Ọ dị mma, echere m na ị ga-eme nke ọma na Atọm .. mana amaghị m, ị kwesịrị ịnwale 😀
Ndewo, ejirila m ya ogologo oge ma ọ masịrị m nke ukwuu, mana o nwere nkwarụ (n'echiche m) ọ bụ na ọ zọpụtaghị ebe ọrụ m, ma ọ bụ akwụkwọ mepere emepe, ị maara ma ọ gbanwere?
Odi nma, odi ka ha doziri ya ...
Daalụ, m ga-anwale ya ọzọ 🙂
Daalụ Elav maka ọnụ, aga m agwa gị na Atọm na-ejikarị ya eme ihe karịa Text Sublime Dị ebube. Brackets enyebeghị m ọtụtụ ohere, enwere m echiche na ọ dị arọ, Atọm mekwara ka ọ dị mma n'echiche ahụ.
Mgbaaka na-adị nwayọ oge ụfọdụ, ọkachasị mgbe ị tinyere ụfọdụ ndọtị na ya, mana ọ naghị arọ ... n'aka, Atọm ma dị mma na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ikekwe n'ihi na e wuru Brackets na teknụzụ Weebụ.
Atọm wuru na elektrọn (https://github.com/atom/electron) nke m ghotara bụ teknụzụ weebụ 🙂. Cheers
Zaghachi ka ego
Anaghị m aghọta mgbe ahụ etu Brackets siri adị nwayọ imepe ma ọ bụ nwee nsogbu mmechi na Atọm adịghị 🙁
Agbanyeghị na nke a bụ nchịkọta akụkọ asụsụ dị iche iche, maka GO, m na-eji LiteIDE + Godoc. Gaa edezi koodu na nrụrụ. Naanị maka Go (ma ọ bụ Golang maka nyocha).
Fechaa na maka Linux, Windows na BSD.
O doro anya na mkpokọta, nbipu, ogbugbu, wdg.
O nweghi ihe omuma ihe osise, obu ezie na i nwere ma ulo akwukwo ma web.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị hapụụrụ anyị njikọ ma ọ bụ iwu maka GNU / Linux ndị ọzọ na-abụghị Arch Linux, nri? ederede ederede a dị mma. daalụ.
Na otu weebụsaịtị https://atom.io/ hụ na-akọwa otu esi etinye ha na nyiwe ndị ọzọ 😉
Nke ahụ ziri ezi, yana na njikọ ikpeazụ nke post ahụ enwere ọnụọgụ abụọ dị.
Na Gentoo na nkwekọrịta ya arụnyere na m machie 😀 https://github.com/jorgicio/jorgicio-gentoo
Echere m na ị ga-achọ asụsụ GO, obere mmalite nke C, ọ bụghị c ++.
Ah, ọ bụghị godoc, ọ bụ gocode. Ndudue mi.
Ndo, ọ bụ onye ndezi na ọ bụghị asụsụ.
Echetara m ịwụnye Atom ma ọ rie ọtụtụ akụ, ọ were ogologo oge ọrụ, ọ bụrụ na mmadụ anwalela ya, gwa ahụmịhe ahụ.
Zaghachi Gonzalo Ruiz
M arụnyere ya ụnyaahụ ... Achọrọ m ka nsụgharị ikpeazụ pụta maka ogologo oge iji nwee ike dochie Sublime Text 2 n'otu oge ... Yesnyaahụ m mere mgbanwe ahụ, m wụnye ụfọdụ plugins dị ka Mee ma gosipụta akara ma enwere m obi ụtọ :).
Agbalịrị m Atọm ma hụ ntụnyere n'etiti nke ahụ na Ederede Dị Mma. Eziokwu bụ, ahụghị m ihe kpatara ọtụtụ diski ike diski, ọ bụ ezie na ọ bụ nnọọ ngwa ngwa. Ederede Dị Mma anaghị eri karịa 20 MB. E wezụga nke ahụ, ahụghị m ihe ọ bụla la la Arduino maka Atọm (maka Ederede Dị Mma, enwere Stino, iji chịkọta mmemme maka Arduino ma jiri ya dị ka IDE). Yabụ ugbu a, m gafere. Mana enwere ekele.
Nke a bụ .deb m mere maka i386:
ọ bụ maka ìgwè ndị nwere arq ... 86 ?? Cheers
Ọ bụ maka kọmputa 32-bit ...
Eleghi anya ajụjụ m ga-ajụ gị dị ka ihe ijuanya, mana ị maara ma ọ bụrụ na enwere ederede ederede enwere ike ịhazi ya n'ụzọ ọ ga - ahapụ oke n'akụkụ aka ekpe tupu ị dee?
Daalụ n'ọdịnihu. Achọrọ m ya ma ahụghị m ya.
Anọgidere m na Brakets na-arapara, dị ka Elav na-ekwu, ịhụ agba dị na CSS yana ihe oyiyi na-echekwa m ọtụtụ, ọtụtụ ọrụ.
onye ọ bụla nwere rpm maka i386?
ị nwere ike ịhapụ m njikọ m ga-enwe ekele
Enwere ike ịhụ agba site na ịwụnye pigments.